Minisiteran’ny Rano sy ny Instat: havaozina ny antontanisa mikasika ny rano… | NewsMada
Tontosa, omaly tetsy Ambohijatovo, ny sonia fifanaraham-piaraha-misa eo amin’ny minisiteran’ny Rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana niaraka amin’ny Instat. Tanjon’ny fiaraha-miasa ny hanavao ny antontanisa mahakasika ny tontolon’ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana eto Madagasikara.
Mahasahana sehatra maro ny fanavaozana izany antontanisa izany. Voakasiky ny fanisana ny tahan’ny fahazoan’ny vahoaka malagasy rano madio fisotro, ny fomba fahazoan’ny tokantrano tsirairay rano ampiasaina ao an-trano, ny fampiasana lavapiringa madio sy ara-pahasalamana, ny fahavitrihana amin’ny fanasana tanana amin’ny rano sy ny savony…
Efa misy ny antontanisa, saingy tsy mbola mivoaka amin’ny fomba ofisialy izany, raha ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny Instat.
Andrasana, araka izany, ny hanana antontanisa marina ahafahana manana ny mari-drefy enti-mamantatra ny ezaka vita sy manamafy ny ezaka tokony hohamafisina.
“Mizotra amin’ny fanatrarana ny tanjona napetraky ny filoha Rajoelina Andry, ao anatin’ny vinan’ny fisandratana, ny tokony hananana mari-drefy marim-pototra ny minisitera amin’ny alalan’ity fiaraha-miasa ity”, hoy ny minisitra Rakotovelomanantsoa Voahary.
Raha ny tanjona napetraka ho amin’ny taona 2023, tokony avokoa hisitraka rano madio fisotro ny 60%-n’ny mponina eto Madagasikara. Amin’ny alalan’ny fahafantarana indrindra ny antontanisa miainga eny ifotony hataon’ny Instat ny ahafantarana sy mandrefy izany aoriana.
Marihina fa mifototra amin’ny hafatra lehibe efatra no voizin’ny minisiteran’ny Rano: ny fitazomana ny fahadiovan’ny rano manomboka eny am-pantsakana hatramin’ny fampiasana azy, ny fampiasan’ny tokantrano lavapiringa madio, ny fanasana tanana amin’ny savony ary koa ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana.